မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဧပြီ ၁၉၉၄ (၁၉၉၄-၀၄)
အမှတ်(၁)၊ သစ္စာလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မိုးမြင့်ထွန်း၊ ဥက္ကဋ္ဌ
ဦးအောင်နိုင်ဦး၊ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ
မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်(အင်္ဂလိပ်: Myanmar Investment Commission; အတိုကောက် MIC)သည် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ပြည်တွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အဆိုပြုလွှာများကို တန်ဖိုးသတ်မှတ်ပေးရန်နှင့် အဓိကကဏ္ဍများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုများအတွက် အမိန့်ကြော်ငြာစာများကို ထုတ်ဝေရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းထား​သောကော်မရှင်အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ လက်ရှိဥက္ကဋ္ဌ မှာ အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ မင်းအောင်လှိုင်မှခန့်အပ်သော စစ်ကောင်စီဝင် မိုးမြင့်ထွန်းဖြစ်သည်။
၄ ဥက္ကဋ္ဌများ (၂၀၁၁ -လက်ရှိ)
နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့၏ လမ်းညွှန်ချက်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းပြီးသော ၁၉၉၄ ဧပြီတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် အဖွဲ့အစည်းတွင်းပြောင်းလဲမှုများစွာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီး ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် လေးဦးထိ လျော့ချခြင်းခံခဲ့ရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်တွင် ၁၉၈၈ နိုင်ငံခြားသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေလည်း အသက်ဝင်သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်မှုအဆိုပြုလွှာများကို သေချာမှန်ကန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်အတွက် အဖွဲ့ဝင် ၁၆ ဦးထိ တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ 
မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုဥပဒေအသစ်အရ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ အခန်းကဏ္ဍတွင် ပြောင်းလဲမှုများ ရှိခဲ့ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အဆိုပြုချက် အနည်းငယ်အတွက်သာ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့် ရယူရန် လိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပြုလွှာများကို လျင်မြန်စွာ စိစစ်၍ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်မှ အတည်ပြုသည့် အတည်ပြုမိန့်ကိုလည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ အနေဖြင့် လျှောက်ထား နိုင်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ကို မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ အစိုးရ ဝန်ကြီးဌာနများ၊ ဦးစီးဌာနများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပညာရှင်များ သင့်လျော်သောပုဂ္ဂိုလ်များအား အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ပါဝင်စေလျက် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ ပြဋ္ဌာန်းထားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေဖြင့် အကာအကွယ်ပေးရန်
နိုင်ငံတကာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ပွင့်လင်းမြင်သာ၍ တာဝန်ယူမှုရှိသော ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် စစ်ဆေးမှုအလေ့အကျင့်များဖြစ်စေရန်
၂၆ X ၂၇ လမ်းကြား၊ ၈၄လမ်း၊ ဈေးချိုအရှေ့ဘက်တိုက်တန်း၊ တတိယထပ်၊ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ် ၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။
ဥက္ကဋ္ဌများ (၂၀၁၁ -လက်ရှိ)[ပြင်ဆင်ရန်]
စဉ် အမည် ရာထူး ဝန်ကြီးဌာန ရာထူးစတင် ရာထူးပြီးဆုံး
၁ ဦးစိုးသိန်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန
၂ ဦးဝင်းရှိန် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာန ၂၀၁၃ ၂၀၁၆
၃ ဦးကျော်ဝင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ၂၀၁၆ ၂၀၁၈
၄ ဦးသောင်းထွန်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး
၁၆ ဇွန် ၂၀၁၈ ၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁
၅ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မိုးမြင့်ထွန်း ကောင်စီဝင် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ၄ မတ် ၂၀၂၁ လက်ရှိ
လက်ရှိအဖွဲ့ဝင်များကို ၂၀၂၁ခုနှစ် မတ်လ ၄ရက်နေ့တွင် အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ မင်းအောင်လှိုင်မှ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌမှာ အရပ်ဘက်မဟုတ်ဘဲ စစ်ဘက်မှ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။
စဉ် အမည် ရာထူး တာဝန်
(က) မိုးမြင့်ထွန်း အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဝင် ဥက္ကဋ္ဌ
(ခ) ဦးအောင်နိုင်ဦး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး
ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ
(ဂ) ဦးခင်မောင်ရီ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန အဖွဲ့ဝင်
(ဃ) ဒေါက်တာသီတာဦး ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်
(င) ဦးညွန့်အောင် ဒုတိယဝန်ကြီး
(စ) ဦးဝင်းသော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ
(ဆ) ဦးကျော်မင်းဦး အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်
(ဇ) ဦးမင်းထွဋ် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
(ဈ) ဦးသန့်စင်လွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ "မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်"၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန။
↑ ၂.၀ ၂.၁ Kudo, Toshihiro (August 2007). "Toshihiro": 15. Institute of Developing Economies. [လင့်ခ်သေ]
↑ Mya Than; Carolyn Gates (2001)။ ASEAN enlargement: impacts and implications။ Institute of Southeast Asian Studies။ pp. 265။ ISBN 9789812300812။
↑ "Myanmar reforms investment commission to boost foreign investment"၊ Xinhua၊ 8 June 2011။ 10 March 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "မြန်မာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင် ပြန်ဖွဲ့စည်း"၊ DICA။
↑ "မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးကျော်ဝင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း"။ Archived from the original on 11 May 2021။
4.Taipei American Chamber of Commerce; Topics Magazine, Analysis, November 2012. "Myanmar: Southeast Asia's Last Frontier for Investment: 
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြန်မာနိုင်ငံ_ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု_ကော်မရှင်&oldid=744298" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၁ မေ ၂၀၂၂၊ ၁၇:၄၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။